पेट रोग (ग्यास्ट्रिक) Such Problems Can Occur If The Food Eaten Is Not Digested: Nepali Health Media
शरीरमा धेरै वटा रोगहरुको सुरुवात प्राय खाएको खाना नपचेर अर्थात पाचन प्रणाली खराब भएको कारण हुने गरेको पाइन्छ . पाचन प्रणाली खराब भए पछी खाएको खाना राम्ररी पच्दैन र खाएको नपचे पछी खानाबाट पाइने प्रसस्त पोषण तत्वहरु हाम्रो शरीरले लिन पाउंदैन र पाचनमा समस्या आएर खाएको खाना सड्ने गर्छ, पेट मा विषाक्त पदार्थ जम्मा हुन्छ, ग्यास्ट्रिक बढ्छ र यसै बाट शरीरमा रोग लाग्न सुरु हुदछ .
हामी सबैलाई थाहा छ कि खाएको खाना नै हाम्रो शरीरको इनर्जी पाइने एक मुख्य स्रोत हो . तर खाएको नै पच्न छोड्यो भने यसले पेटमा मात्र होइन शग्यास्ट्रिक हरेक अंगहरुमा समस्या बनाउन सुरु गर्दछ.
हामीले खाना खाए पछि कि पच्दछ कि सड्दछ . यी २ मध्य यदि खाएको खाना पच्यो भने धेरै राम्रो कुरा हो तर पचेन भने अब उक्त खाएको खाना सड्नेछ र यसले दिशामा समस्या, पेटमा समस्या, छाला मा समस्या, अनुहार मा फोका निस्कने समस्या, जिउ चिलाउने समस्या जस्ता विविध समस्याहरु बाट शरीर मा रोग को बिकास हुन सुरु हुदछ .
खाएको खाना नपच्दा पेट दुख्ने मात्र हुन्छ भनिन्छ तर पेट दुख्ने संग सगैं शरीर मा अनेक किसिमका समस्या हरु उतपन्न हुने गर्दछन . धेरैले ग्यास को समस्या भोगेको छन् तर ग्यासको समस्या नै हाम्रो शरीरमा रोगहरुको सुरुवात गराउने सबै भन्दा पहिलो चरण हो . कुनै पनि रोग विरुवा सुरुमा हुर्किन अघि उसको मुख्य जरो नै ग्यास्ट्रिक (Gastritis) बाट सुरु हुन्छ . ग्यास्ट्रिकलाई रोगहरुको राजा पनि भनेर चिन्ने गरिन्छ किनकि यो नै रोगहरुको सुरुवात गराउने मूल जरो हो. जस्तै कि खाएको नपचे पछी ग्यास्ट्रिक बढ्न सुरु हुन्छ त्यसपछि उक्त ग्यास्ट्रिक को समस्याबाट कब्जियत, पायल्स, अल्सर र त्यसपछि क्यान्सर जस्तो भयानक रोग मा परिवर्तन हुन जान्छ .
यति मात्र होइन पेट र मस्तिस्क बीच पनि गहिरो सम्बन्ध हुन्छ पेट बिग्रन सुरु भए पछी शरीर आलस्य हुन सुरु हुन्छ, बढी थकान हुने र डिप्रेसन सम्म पुर्याउने गर्छ.
पाचन बलियो बनाउन के गर्ने ?
पाचन बलियो बनाउन पाचनलाइ साहयता दिने किसिमको खानाहरु सेवन गर्नु पर्दछ .
फाइबर युक्त खानाहरु सेवन गर्नु पर्दछ .
तनाव कम गर्ने र व्यायाम गर्ने गर्नु पर्दछ.
पानी प्रसस्त पिउनु पर्दछ .
चुरोट, खैनी, रक्सि जस्ता लागु पदार्थ सेवन गर्ने खराब बानी छोड्नु पर्दछ.
Tags: #kathmandu backbone pain gs nepal health care health tips Health tips in nepali Health tips in nepali language nepali education tips nepali health nepali health care nepali health education nepali health media Nepali Health News Nepali Health tips nepali health tips education nepali health tips gastric nepali health tips promegranate nepali health tv nepali healthy food nepali sosthe jankari nepali swasthya jankari news of nepal news2 nepal rabi lamichhane swasthya jankari swasthyajankari अनुहार मा फोका निस्कने समस्या अल्सर कब्जियत क्यान्सर खाली पेटमा खानु पर्ने खानाहरु खाली पेटमा नखानु पर्ने खानाहरु ग्यास्ट्रिक ग्यास्ट्रिक को उपचार छाला मा समस्या जिउ चिलाउने समस्या ढाड दुख्नु दिशामा समस्या पाचन पाचन बलियो बनाउन पायल्स पेट दुख्ने पेटमा समस्या रोगहरुको सुरुवात